Ndị nledo dịka anu ulo | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Ndị nledo dịka anu ulo - Uru
Onye kpebiri ịbụ ududo dị ka nwa atụrụ, aghaghị ịma na ọ bụghị ihe egwuregwu ụmụaka. A na-etinye ududo na aka mgbe ụfọdụ, mana ka anụ ahụ na-ahọrọ ebe ịnọ jụụ na terrarium.
Spiders dị ka Pita
Ọ bụrụ na aka ruru terrarium, nke a na-akpata nchekasị maka spiders, anụ ahụ nwere ike ịta. Na terrarium nke ududo na-edebe ya ga-enwe ihe mgbakwasị ụkwụ nke 30 × 40 centimeters. Ịdị elu kwesịrị ịtụle 50 centimeters. Mgbe a na-akpụgharị, a gaghị eri anụ ahụ.
Ma ọ bụghị ya, ihe oriri nke spiders gụnyere ụmụ ahụhụ na arachnids dị ndụ, dịka ụkpara nke nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa ndị ọkachamara. Tụkwasị na nke a, mmiri zuru oke kwesịrị ịdị. Àgwà nke spiders dị nnọọ mfe. Anu anumanu achoghi oke ohia oku na dika ogbu ahihia dika ala.
Kedu ụdị spiders kwesịrị ekwesị?
Ndị na-ewu ewu udide udide dị ka anụ ụlọ, bụ ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, na ufe na-acha uhie uhie na nnụnụ na-acha red-knee tarantula. Onye nke mbu bu uzo ise na isii n'ogologo ma nwee udo ma siri ike. Ihe na-acha uhie uhie chile tarantula na-eto nwayọọ nwayọọ ma na-akwusi nri ruo ogologo oge. Ihe oriri a na-ahọrọ nke ụlọ ududo a bụ ụmụ ahụhụ na ụmụ oke ụmụ.
Ududo uhie na-acha uhie uhie bụ ududo nnụnụ na afọ ruo afọ 15. Ihe oriri kachasị mma nke udide ududo a bụ ụkpara ma ọ bụ ihe ọchị. Ọzọkwa, reddish-brown crown crown na-ewu ewu na-ewu ewu dị ka anụ ụlọ na-adabara karịsịa maka ndị na-amalite dị ka udide akpa udiri. A na-enye ya nri na crickets ma ọ bụ ụkpara.
Kedu ihe spiders na-eri?
Dabere n'ụdị na ụdị na umu, ụdị tarantula na-akwụ ụgwọ ruo 200 Euro. Ngwurugwu dị mkpa maka ududo na-akwụ ụgwọ n'etiti iri na iri ise euro, dabere na nha ya. na-abata na ala, 15 liter ogbugbo mulch, anụ anụmanụ na-eri nri.
Ndị na-agba afa dị ọcha ma dị jụụ
Enweghị ohere dị ukwuu iji dịrị ndụ
Ikiri spiders bụ ihe na-adọrọ adọrọ
Ụdị ọnụ ala
Mwepu dị nta
Ọtụtụ ndị na-eme onwe ha ihere na spiders ma nwee ezigbo arachnophobia. Onye ọ bụla nwere spider dị ka anụ ụlọ, ga-atụ anya na nleta ahụ, onye na-abịa n'ụlọ site na spiders na-asọ oyi, "na-agba gburugburu" n'ebe ahụ. Naanị okwu udide na-eme ka enweghi nsogbu na ụjọ na ọtụtụ ndị mmadụ.
"Ndị nkatọ" na-agbanyeghị ntutu na-agbagharị agbagọ, ndị na-agbagharị n'elu ala, ọtụtụ ndị na-agbanye hackles. Maka nke a, ị gaghị ekwesara onye ọbịa ahụ ngwa ngwa na ị nwere ududo dịka anụ ụlọ.
Mmanya dị ka aphrodisiac - erotic
USA njem - United States dị ka ebe njem
Idebe nke ọma rabbits - anu ulo